မွသဲ ရဲ့ ထမင်း အမျိုးမျိုးးးး – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မွသဲ ရဲ့ ထမင်း အမျိုးမျိုးးးး – KZ’s ထမင်းဆိုင်
မွသဲ ရဲ့ ထမင်း အမျိုးမျိုးးးး – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Jan 27, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 55 comments
ပင်တိုင် စားဖိုမှူးကြီး မွသဲ
ဒေသစုံ အစားအသောက်ချက်ပြုတ်မဲ့ ဦးဆာမိ တို့ ကူကြ ညီကြပါဦးးးးး
နည်းနည်းအားပြီ ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ အပူကပ်ရမလည်း စဉ်းစားနေပြီ။ )))
အဲဒီလို စတေးတပ်တင်ပြီး စားဖိုမှူးချုပ်တွေကို ပြန်ဒုက္ခပေးလိုက်တာ။ အနီးကပ်ဆုံး မွသဲ ဆီက ရပါတယ်။
ကေဇီက ထမင်းကြိုက်သမားမို့ ထမင်းမျိုးစုံကို အရမ်းကြိုက်တာ။ အဲဒါ ၇ မျိုးပြည့်အောင်စဉ်းစားပြီး မွသဲကို ပြတော့ အမက အကုန်ချက်တတ်သတဲ့။
ဒီတော့ ဒီ ၇ ရက်ဟာ ထမင်း အမျိုးမျိုး စားရမှာပါ။
၁. ကြက်ဆီထမင်း ယိုးဒယားစတိုင် ကြက်ဆီထမင်းလေးပါ။
၁. ကြက်ဆီထမင်း ယိုးဒယားစတိုင် ကြက်ဆီထမင်းလေးပါ။ (ခရက်ဒစ် တူ ဝတ်ရည် Food House)
• ကြက်ရင်ဗုံသား(သို့)ကြက်ပေါင်ရင်သား ♦ ၆၀၀ ဂရမ် (၄ခု)
• ရိုးရိုးဆန် ♦ နို့ဆီခွက် ၃ခွက်
• ဆား ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
• ပဲငံပြာရည် အနောက် ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
• နံနံပင် ♦ ၁စည်း (ရေဆေးထား အမြီးဖြတ်ပါ)
• သခွာသီး ♦ ၁လုံး (အခွံနွှာ အ၀ိုင်းလှီးပါ)
• ရေ ♦ ရခွက်
• ဂျင်း ♦ ၆ပြား (ပါးပါးလှီးပြီသား)
• ကြက်သွန်ဖြူ ♦ ရ ခု (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပေးပါ)
• ပဲငံပြာရည် အကြည် ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
• ပဲငံပြာရည် အနောက် ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
• ပဲငပိ အနှစ် ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်းစာ
• သကြား ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
• ဗီနီကာ ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
• ဂျင်း ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
• ငရုတ်သီးနီ(သို့)စိမ်း ♦ ၅ခု (ပါးပါးလှီးပါ)
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်ထဲ ကြက်အရေခွံများထည့်ကာ အညှိရောင်သန်းလာအထိ ကြော်ပေးပါ။ မှတ်ချက် ။ ။ ရိုးရိုးဆီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ချက်လျှင်လည်း ရသည်။
၂။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားတဲ့ ကြက်အရေခွံများကို ဖယ်ကာ ထိုကြက်ဆီများဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် လုပ်ပေးပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျန်ကြက်ပြုတ်ရည်များကို ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ခပ်ပြီ ဟင်းချိုအဖြစ်တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်
၂ .ထောပတ် ထမင်း ထောပတ် ထမင်း နဲ့ ကြက်သားဟင်း (၈ယောက်စာ) ထောပတ် ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း ချက်နည်းလေးပါ။
အလျှူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့လည်စာ၊ ညနေစာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်စားနိုင်အောင်ပါ။ ထောပတ်ထမင်းဆိုတာနဲ့ ထောပတ်အနံ့သင်းပြီ အရသာ အရမ်းကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ တန်းသိနိုင်မှာပါ။
ထို့ပြင် ချက်ရတာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူပင် လုပ်စားနိုင်သည်မို့ ထောပတ် ထမင်းကို ခုပဲ လုပ်လိုက်ကြရအောင်…
ထောပတ် ထမင်းတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
• ဆန် – နို့ဆီဘူး ၂လုံး (ရေဖြင့် ဆေးထားပေးပါ)
• ဂီးထောပတ် – ၈၀ ဂရမ်
• စပျစ်သီးခြောက် (အမဲ) – ၁ခွက်စာ
• သီဟိုဌ်စေ့ – ၁ခွက်စာ (ထက်ခြမ်းခြမ်းထားပါ)
• ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး (ပါးပါးလှီးပါ)
• ကလဝေရွက် – ၃ရွက်
• သစ်ဂျပိုး – ၁ခု
• ဖာလာစေ့ – ၄စေ့
• လေညှင်းပွင့် – ၄ခု
• ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
• ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ပုံ၁ပုံ
• ချက်ပြုတ်နည်း •
၁။ ဒယ်ထဲ ထောပတ်များကို ထည့်ပြီ ထောပတ် အရည်ပျော်လျှင် ကြက်သွန်နီများကို ဆီပူထိုးပေးပါ။ •
၂။ ပြီနောက် သစ်ဂျပိုး၊ ကလဝေရွက်၊ လေညှင်း၊ ဖာလာစေ့များကို ထည့်ပြီ ၁မိနစ်ခန့် ရောမွှေပေးပါ။ •
၃။ ပြီမှ သီဟိုဌ်စေ့ကိုထည့်ပြီ နောက်ထပ် ၁မိနစ်ခန့် တည်ထားပါ။ •
၄။ ထို့နောက် ဆန်ထည့်ထားသော Rice Cooker ထဲသို့ ဒယ်ထဲမှ ထောပတ်ရည်၊ သီဟိုဌ်စေ့၊ စပျစ်ခြောက်၊ spices တို့ကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ •
၅။ ရေ( ၄ ဗူး )၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ သကြား ( အချိုမကြိုက်လျှင်မထည့်လဲရသည် ) တို့ကို ထည့်ပြီ ထမင်းရိုးရိုးချက်သလိုပဲ ချက်ပေးပါ။ •
၆။ ထောပတ် ထမင်းကျက်ပြီဆိုလျှင် သမအောင် ယောက်မဖြင့် ရောမွှေလိုက်ပါ။ •
ရ။ ထို့နောက် အရသာ အနေတော်လျှင် အရသာ ရှိသော ထောပတ် ထမင်းကို ကြက်သားဟင်း၊ • ငပိကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက် ဟင်းချို တို့ဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ… •
• ကြက်သားဟင်းအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ •
၁။ ကြက်သား – ၄၀ကျပ်သား (အတုံးကြီးများ တုံးပါ) •
၂။ ကြက်သွန်နီ – ၆လုံး (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ) •
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၄မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ) •
၄။ ဂျင်း – လက်တဆစ် (နှုတ်နှုတ်စဉ်း အရည်ညှစ်ပါ) •
၅။ အရောင်တင်မှုန့် (ငရုတ်သီးမှုန့်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း •
၆။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း •
ရ။ ခနော ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း •
• ကြက်သားဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း •
၁။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (ကြက်သား၊ ကြက်သွန်နီ(တ၀က်)၊ ကြက်သွန်ဖြူ(တ၀က်)၊ ဂျင်း၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်)တို့ကို ရောနုယ်ထားပြီ ရေခဲသတ္တာထဲတွင် နာရီဝက်မျှ နုပ်ထားပေးပါ။ •
၂။ ပြီမှ မချက်ခင် ၅မိနစ်လောက် အပြင်ကို ကြိုထုတ်ထားပေးပါ။ •
၃။ ဒယ်ထဲသို့ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း) ထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ကျန် ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ(တ၀က်)ကို ဆီသပ်ပေးပါ။ •
၄။ ပြီနောက် အရောင်တင်မှုန့်ထည့်လိုက်ပါ။ •
၅။ ထို့မှ နုပ်ထားသော ကြက်သားများကို ရောမွှေကာ ၂မိနစ်ခန့် မီးအသင့်တင့်ဖြင့် လုံးချက်ပေးပါ။ •
၆။ ကြက်သားနူးရန် ကြက်သားမြုပ်ရုံ ရေထည့်ပေးပြီ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ မနူးသေးလျှင် နောက်တစ်ရေ ထပ်ထည့်ပါ။ •
၃. ပဲထမင်း လုပ်နည်းလေးပါ။
တချို့လည်း ပဲထမင်းကို ပဲနီလေးနဲ့ ချက်တာရှိပါတယ်။ ကျွန်မက ပဲထမင်းကို ကုလားပဲနဲ့ ချက်ပါတယ်။ ကြက်သားဟင်းနဲ့ ငပိကြော်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်ဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။
• ပေါ်ဆန်းမွေးဆန် – ၁ ဗူးခွဲ
• ကုလားပဲ (သို့ ) ပဲနီလေး – နို့ဆီဗူး တ၀က် (ရေစိမ်ထားပါ) ( ကုလားပဲကို တချို့ကပြုတ်ထား ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အစိမ်းအတိုင်းပဲချက်ပါတယ်။ မနက်ချက်မယ်ဆိုညကတဲကစိမ်ပါတယ်။ ညနေချက်မယ်ဆို မနက်ကတဲကစိမ်ပါတယ်။ ) • ရေ – ၃ ဗူး • ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး (ပါးပါးလှီးပါ) • ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
• ဖာလာစေ့ – ၃စေ့
• ကလဝေရွက် – ၂ရွက်
• လေညှင်းပွင့် – ၃ပွင့်
• ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
• ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
• ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၄။ ထမင်း တ၀က်ကျက်သွားလျှင် ပဲနီလေးကိုထည့်ပြီ ရောမွှေပေးပါ။ ( ကုလားပဲနှင့်ဆိုလျှင် အစကတဲက တခါတည်းထည့်ချက်ဖို့လိုပါတယ်။ )
၄. အုန်းထမင်း (၄ယောက်စာ)
• ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန် – ၂ ဗူး
• အုန်းနို့ခရင်း – ၁၆၀မီလီလီတာ ( ပိုထည့်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဗူးနဲ့အုန်းနို့ပဲသုံးပါတယ်။ ဆိုင်မှာသွားညှစ်ဖို့ခက်လို့ )
• ရေ – ၄ ဗူး ( ဆန်ပိုရင်ရေလျှော့ထည့်ပါ )
• ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
• ဂျင်း – ၃ပြား • ဆွမ်းမွှေးရွက် – ၁ရွက် (ချည်ထားပါ)
Optional ( ဆွမ်းမွှေးရွက်မကြိုက်လျှင် သစ်ဂျပိုး – ၂ ခု
• ကလဝေးရွက် – ၄ ရွက် ခန့် ဆီသတ်ထည့်နိုင်ပါတယ် )
၁။ အရင်ဆုံး ဆန်ကို ရေ၃ကြိမ် ဆေးပြီ အုန်းနို့ခရင်း၊ ရေ၊ ဆား၊ ဂျင်း၊ ဆွမ်းမွှေးရွက် ( ဆွမ်းမွှေး ရွက်မကြိုက်လျှင် သစ်ဂျပိုး၊ ကလဝေးရွက် တို့ကိုဆီသတ်ထည့်နိုင်ပါတယ် ) တို့ကို ထည့်ပြီ ရိုးရိုး ထမင်းချက်သလို Rice Cooker ဖြင့် ချက်ပေးပါ။
– ဘာစမာတီဆန်နို့့ ဆီဗူး (၄)လုံး
– ကြက်သား (၆၀)သားခန့် ( ရင်အုပ်ပိုင်း ၊ပေါင်ပိုင်း )တစ်ကောင်လုံးအလေးချိန် ၄၅ကျပ်သားခန့် ရှိကြက်
– ဆား ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ဒံပေါက်မဆလာ …… (ဒံပါက် မဆလာမရှိလျှင် တစ်အိုးစာ မဆလာလုပ်နည်းကို အဆုံးတွင်ဖေါ်ပြပါမည် ။)
ဦးစွာပထမ ကြက်သားကို ဒံပေါက်ဆိုင်များမှ ပုံစံအတိုင်း ပေါင် ၊ရင်အုပ်ပိုင်း ခွဲခြမ်းပြီး ဆား၊ နွားနို့(သို့) နို့စိမ်း ၊ ဟင်းခတ်မှုန့်  ၊ ဒံပေါက်မဆလာ တို့ဖြင့်  တစ်နာရီခွဲခန့်  နှပ်ထားပါ ။
နှပ်နေစဉ်အတွင်း အထက်က စပျစ်သီးခြေက်များ ၊ သီဟိုစေ့များကို ထောပတ်ဖြင့် ဆီပူထိုး၍ ထောပတ်ဆီသပ်သပ် ၊ ကြော်ပြီး သား စပျစ်ခြောက်နှင့်  သီဟိုစေ့ များကိုသပ်သပ်ခွဲထားပါလေ ….။
ထို့နောက် …..နှပ်ထားချိန်စေ့ပါက ထမင်းပေါင်းအိုးအတွင်းသို့ ၄င်း ကြက်သားများကိုအောက်တွင်စီ၍ ထည့် ရပါမည် ….။ (လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်အိုးဖြင့်  ချက်၍ရသည် )
ကြက်သွန်နီသုံးမွှာခန့်ထောင်း၍ ထိုကြက် သားများနှင့် ရောနယ်ပြီး ထည့် ပါလေ ……..။
ကြက်သားများနှပ်ထားစဉ်က ထွက်ရှိ သော အရည် များ ကိုရောမထည့် သေးပဲ ရေထည့် မည့် အခါမှသာ ရေချိန်အတိုင်းတွက်ချက်၍ထည့် ရပါမည် ၊ သို့မဟုတ်ပါ က ရေအချိုးများပြီး ထမင်းပျော့ မည်ဖြစ်ပေသည် ။
ကြက်သားတုံးများထည့် ပြီးပါက ဆီတစ်ဆယ်သားခန့်  ကိုထည့် ရမည် …။
ပြီးနောက် …..ရေဆေးပြီး အသင့် စစ်ထားသော ဆန်ကို ၄င်းကြက်သားတုံးများပေါ်မှ ညီညာစွာဖြန့် ထည့် ရမည် ။
ဆန်များနှင့်အတူ သစ်ဂျပိုးခေါက် သုံးလေးစခန့်  ၊ ကရဝေးရွက် (၆)ရွက် ၊ နှင့်  ပဲစိမ်းဗူး တစ်ဝက်ခန့် ကိုသမမျှတစွာ ရော၍ ထည့် ပါလေ …..။
ဖာလာစေ့နှင့်  လေးညှင်းပွင့်  တို့ကို ကြက်သားနှင့် အတူ ထည့် ရန်မမေ့ ပါနှင့်  …..။
ဆန်ထည့် ပြီးပါက စောစောက ကြက်သားမှထွက်ရှိသောအရည်များ အပါအ၀င် မိမိထည့် နေကြ ရေခန်း ချက်နည်းအတိုင်းရေကိုချင်တွယ်၍ထည့် ပါ ။
ဆန်အမျိုးအစားမတူလျှင် လည်းကောင်း ဆန်သစ် ဆန် ဟောင်း မတူလျှင်လည်းကောင်း ရေအချိုးကွာနိုင်သဖြင့်  မိမိ ထည့် ချက်နေကျပုံစံအတိုင်း ထည့် စေ ခြင်းဖြစ်သည် ။
(ဆန်သစ်နှင့်  လုံးဝ မချက်ပါနှင့် ) ရေထည့် လျှင် ညင်သာစွာထည့် ရပါမည် ..။
အသားများပေါ် ဖုံးအုပ် ထားသော ဆန်များ ပုံမပျက်စေရန်ဖြစ်သည် ။
ပြီးနောက် …ထမင်းအိုးကိုပံမှန်အတိုင်း ချက်ပြီး ထမင်းနပ် သော အခါ ချက်ခြင်းမချသေးပဲ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်  ထပ်၍နှပ်ပါလေ …..။
နောက်ဆုံးအကြိမ်နှပ်ပြီးပါက အထက်က ဆီပူထိုးခဲ့ သော သီဟိုစေ့  နှင့်  စပျစ်ခြောက် တို့ကို အိုးထဲသို့ ဖြူး၍ထည့် ပြီးလျှင် ယခင်က သပ်သပ်ဖယ်ထားသော ထောပတ်ဆီများကို အဆိုပါထမင်း အိုးထဲသို့ မျှတစွာ လောင်းထည့် ပါ ။
ပြီးလျှင် …(၁၀) မိနစ်မျှ အဖုံးပိတ်ပြီး ပြန်နှပ်ပါ ။
ထို့နောက် အဖုံး ကိုဖွင့် ၍ ထမင်းများကို ခတ်တုံးတုံး ယောက်မ (သို့) ထမင်းခတ်ဖိုက်ဘာဇွန်းဖြင့်  အထက်အောက် သမပြီး အောက်ဆုံးမှ ကြက်သားတုံးများကို သီးသန့်  ဖယ်ထုတ်ထားပါ ။
ယခုအချိန်မှစပြီး ရွာသူားတို့အကြိုက် စတင်သုံးဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည် …..။
မဆလာစပ်နည်း ။ ။
ဇီယာစေ့ စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်း ၊ ဖာလာစေ့ (၇)စေ့  ၊လေးညှင်းပွင့်  (၃)ပွင့်  နာနတ်ပွင့် ဖတ် (၃)ဖတ် တို့ကို မီးမကျွမ်းစေအောင်လှော်ပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ ။
တစ်ခါအဆင်မပြေလျှင် နောက်တစ်ခါလုပ်ကြည့် ပါ ။
ခွဒစ်တူကိုဆာမိ ကျွန်မဒန်ပေါက်ချက်နည်းကတော့ နတ်သုဓ္ဒါချက်တဲ့နည်းအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အချိုးအစားများ အနဲငယ်ပြင်ပြီး ချက်ပါတယ်။
၆. နတ်သုဓ္ဒါ (သီးစုံထမင်း)
– ဘာစမာတီဆန်နို့  ဆီဗူး (၄)လုံး
– တစ်ကောင်လုံးအလေးချိန် ၄၅ကျပ်သားခန့် ရှိ မြန်မာ ကြက်သား ( ရင်အုပ်ပိုင်း ၊ပေါင်ပိုင်း ) ၈ ခြမ်း
– စပျစ်သီးခြောက် ( ၁၀ ) ကျပ်သားခန့် 
– သီဟိုစေ့  ( ၁၅ ) ကျပ်သားခန့် 
– ဂီးထောပတ် တစ်ဆယ်သားခန့်  ( အပေါ်မှဖြန်းရန် တူနှစ်လက်တံဆိပ်ထောပါတ် )
– ဒိန်ချဉ် – သစ်ဂျပိုးခေါက် ၆ ခေါက်
– ဆား – ကြက်သွန်နီကြော် ( ၁၀ ) သားခန့် ( ခြေထားပါ )
ဦးစွာပထမ ကြက်သားကို ဒံပေါက်ဆိုင်များမှ ပုံစံအတိုင်း ပေါင် ၊ရင်အုပ်ပိုင်း ခွဲခြမ်းပြီး ဆား၊ ဒိန်ချဉ် ၊ ဟင်းခတ်မှုန် တို့ဖြင့်  တစ်နာရီခွဲခန့်  နှပ်ထားပါ ။
ထို့နောက် နှပ်ထားချိန်စေ့ပါ ကကြက်သွန် နီကြော်ကိုကြက်သားနှင့်ရောနယ်ပါ။
ထမင်းမာမာလေးရစေရန် ရေပွက်ရုံမျှတည် ပြီး ရေသွန်ပြီးစစ်ထားပါ။
ထမင်းရေစစ်လျှင် ဆား၊အရသာမှုန့် များဖြင့်ထမင်းကိုနယ်ပါ။
ထမင်းအိုး အတွင်းသို့ နှပ်ထားသော ကြက်သားများကိုအောက်တွင်စီထည့်ပါ။
အပေါ်မှ စပျစ်ခြောက်၊ သီဟိုစေ့၊ ပဲစိမ်းစေ့ကိုဖြူးပါ။
အပေါ်မှထောပါတ်ဖြင့် ဆီသတ်ထားသော သစ်ဂျပိုးခေါက် နှင့်ကရဝေးရွက် ကိုထောပါတ် တ၀က်ကိုဖြန်းပါ။
အပေါ်မှထောပါတ်ဖြင့် ဆီသတ်ထားသော တ၀က်ကျန်သည့် သစ်ဂျပိုးခေါက် နှင့်ကရဝေးရွက် ကိုထောပါတ် ပါလောင်းထည့်ပါ။
ပြီးလျှင်မီးသွေးမီးဖိုပေါ်တွင် အောက်မီးနဲနဲ အပေါ်မီးများများဖြင့် အထဲမှထမင်းများ နပ်အောင် တနာရီခန့်စိတ်ရှည်ရှည်တည်ရပါမယ်။
ကြက်သားများတူးမှာစိုးသဖြင့် အောက်မီးမှာရှိသည် ဆိုရုံမျှရှိရပါမယ်။
ပေါ်မီးများများနှင့် အငွေ့များအောက်ဆင်းအောင်ယပ်ခပ် ပေးဖို့လိုပါတယ်။
တနာရီခန့်ကြာလျှင်အိုးဖွင့်ကြည့်ပြီး ထမင်းနပ်ပြီဆိုလျှင် မီးကျီးခဲများကိုဖယ်လိုက်ပါ။
ထမင်းပေါင်းကတော့ အစိုပေါင်းနဲ့အခြောက်ပေါင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အခုကတော့ အစိုပေါင်း ( ရန်ကုန်ပေါင်း ) ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆန် – ၂ ဗူး .
ကြက်ရင်ဗုံသား ( သို့ ) ၀က်မိုးခိုသား – ၃၀ သား .
ဥနီ – ၂ လုံး .
ပန်းပွင့် . ငြုပ်ပွစိမ်း – ၃ လုံး ( ကျွန်မကတော့အနံ့မကြိုက်လို့မထည့်ပါဘူး ) .
မုန်ညင်းဖြူထုပ် – ၁ ထုပ် ( တချို့က ဂေါ်ဖီထုပ်ထည့်ပါတယ် ) .
ပဲပြား – ၂ တုံး .
ခရမ်းချဉ်သီး – ၃ လုံး .
ကြက်သွန်နီ – ၃ လုံး .
ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ မွှာ ( ဒါးပြားရိုက်ထားပါ ) .
ငုံးဥ – ၁၀ လုံး .
တရုတ်နံနံ – ၁ စည်း .
ရွှေပဲသီး – ၂၀ ကျပ်သား .
ပဲငံပြာရည် အကြည် .
ဥနီ၊ ရွှေပဲ၊ မုန်ညင်းဖြူ၊ ပန်းပွင့်၊ ငြုတ်ပွစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး ( အစေ့ညှစ်ထားပါ )၊ ကြက်သွန်နီ တို့ကို အတုံးလေးများလှီးထားပါ။
ကြက်သား ( သို့ ) ၀က်သားကို အတုံးလေးများတုံးထားပါ။
ဆား၊ ပဲငံပြာရည် အကြည်၊ အနောက် တို့ဖြင့်နယ်ထားပါ။
အသားနူးလျှင် ဥနီ၊ ရွှေပဲ၊ မုန်ညင်းဖြူ၊ ပန်းပွင့်၊ ငြုတ်ပွစိမ်း၊ ကြက်သွန်နီ တို့ကိုထည့်ကြော်ပါ။
အသီးအရွက်များနူးလျှင် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲပြား၊ ငုံးဥ ထည့်မွှေပါ။
အနဲငယ်ထားပြီးလျှင် အရသာအတွက် သကြား၊ အရသာမှု့န့်၊ ပဲငံပြာရည် အကြည်၊ အနောက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ အနည်းငယ် တို့ကို ကော်မှု့န့်ဖြင့် ရေဖြင့်ဖျော် ထည့်ပါ။
ခဏမျှဆူအောင်ထားပြီး ထမင်းပေါ်လောင်းထည့်ပါ။ ပူပူနွေးနွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အချိုးအဆရော ချက်နည်းရော စံနစ်တကျ ပြောပြထားတာမို့ အကြိုက်တွေ့မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
ယောက်ခမွနဲ့ချွေးမွ ကြိုးစား ချက်နေပုံ။
ဒီပုံ ကို နန်းတော်ရာသူ ဖန်တီးပေးပါတယ်။
စားမယ် စားမယ် ရေးတာ မမလားဟင်
စားမယ် စားမယ် မဟုတ်ပါဘူးးး
စားမှာပဲ စားမှာပဲ ပါ။
ဧကန်န ကိုရာမည ပေ့(ချ) ကနေ ရွာထဲရောက်လာတာထင်တယ်။
အိုက်ချဖိုမူးဆီက ပင်လယ်စာမီနူးစောင့်နေတာပါဆို။ တူဂလာတေးဝူးရယ်။
အတော်လိုက်တဲ့ ယောက်ခမွနဲ့ချွေးမွ ပါလားနော်….
အုန်းထမင်း၊ ထောပတ်ထမင်းကတော့ ထမင်းအိုးဆေးတုန်းချက်ချင်စိတ်ပေါက်ရင် ချက်ချင်းထချက်လိုက်တယ်။ ထမင်းပေါင်းကတော့ ၀ိတ်ချချင်ရင်ချက်စားတယ်။ ဒန်ပေါက်၊ ကြက်ဆီထမင်း နဲ့ နတ်သုဓ္ဒါ (သီးစုံထမင်း) ကတော့ တပါတ်လောက်ကြိုစီစဉ်ရတယ်။
အင်း..ဒီနေ့ MONDAY ဆိုတော့ ယိုးဒယားစတိုင် ကြက်ဆီထမင်းလေးစားသွားပါသည်။
အာဟိ သူများနားကလဲမှီညမ်းထားပါတယ်။ ကွ့ကိုယ်လဲထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ထားပါတယ်။ ဥပမာပဲထမင်းဆိုရင်ကိုယ့်အကြိုက်အတိုင်းချက်စားပါတယ်။ ဟီဟိ။
တွားပါဘီ… တွားပါဘီ မွသဲကို မကျေနပ်တော့ဘူး…
ကျောက်စ်က စင်ကာပူ Mandarin Style, Chatterbox ကြက်ဆီထမင်း တင်မလို့…
ရေးလို့ မပြီးတပြီးမှာ မွသဲ ဦးသွားတယ်… တော်ဘီ တင်တော့ဘူး…
မွေးမြူရေးကြက် ၂လသားအရွယ် ၁ပိဿာကျော် အကောင်က ပိုစားလို့ကောင်းပါတယ်…
စကားမစပ်… ဝတ်ရည်ကို ခွက်ဒစ်စ် မပေးဘူးလားဟင်…
အာဟိ မေ့တွားလို့ ၀တ်ရည်က ကြက်ဆီထမင်းတမျိုးပဲ အကုန်ပါတာပါကျောက်စ်ရယ်။ အိမ်မှာ ကွ့ကိုယ်ချက်လဲအဲနည်း အလှုလုပ်လဲအဲနည်းပဲချက်တယ်။ ရိုးရိုးနည်းထက်ပိုကြိုက်လို့။ အာဟိအာဟိ။ ကျန်တာသူ့ဗားရှင်းနဲ့ကိုယ့်ဗားရှင်းပြောင်းထားပါတယ်။ ငိငိငိ။ သူ့ဟင်းဦးတာနဲ့တူညားကို ဟင့်ဟင့်ဟင့်
ကျွန်မကတော့ ဗမာကြက်ပဲကြိုက်တယ်။ ဒီထမင်းတွေအကုန်ကိုဗမာကြက်နဲ့ပဲချက်တယ်။ ထမင်းပေါင်းကလွဲလို့။ မွေးမြူရေးကပွစိဖွယ်တယ်ကြီး အသားများလို့ကြိုက်ဖူးရယ်။
အင်း … ချွေးမွ ကြည့်ရတာလည်း …
ကျုပ်တို့ရွာက ဘဖြူ အတိုင်းပဲလား မတိဘာဘူးရယ် …
ဟင်းအိုးလည်း သည်ရော ဘဖြူလည်း ဆယ်ရော ..
ဟင်းအိုးလည်း ချရော ဘဖြူလည်း ၀ရော …
ဆိုသလိုပဲ …. အစားအရာမှာ စချက်ကတည်းက စိတ်ချထားရတတ်တာ .. အဟွတ် ..
ထမင်းပေါင်း ချက်တဲ့နေ့ကျ လာစားမယ်ဗျာ ..
နာချက်တဲ့ ဟင်း နာမမြီး ပါဘူးးး
သူများချက်တာမှ ဝင်ကူရင်း စားတာ။
ဒန်ပေါက်နဲ့ နတ်သုဓာတော့ ကြိုက်ဝူး… ကျန်တဲ့ ထမင်းတွေ အကုန်ကြိုက်အိ….
အာဟိ ဦးဆာမိနည်းကလွယ်လို့ ကူးထားတာ။ အဲတော့ဒီအတိုင်းခွဒစ်ပေးပြန်ထည့်ပလိုက်တယ် ခွင့်မတောင်းလိုက်မိဘူး ဆောဒီးပါ။ ခွင့်လွှတ်တယ် ခွင့်ပုတယ်ဆို ဒါန်ပေါက်ထမင်းလေးချက်ကျွေးပါ။ ငပိလဲကူးထားတယ်။ ကြိုပေါထားတာ
မသဲကတော့ ဧည့်သည်များအောင် ခေါ်နေသလိုပဲ။
ထမင်းဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရင်.. အရင်ဆုံးကတော့.. ကျုပ်ကအားပေးမှာပဲ..
ဖြစ်ပုံက.. ယူအက်စ်က လေဒီတွေများ… နေ့စဉ်က..လစဉ်..အဲဒီကနှစ်တွေစီလာတော့… တရက်တရက်.. ဘာဟင်းချက်ရမှန်းမသိ… ရွာလည်နေတတ်တာ..
သတင်းစာထဲ.. KZထမင်းဆိုင်လေး.. .နေ့စဉ်ရက်စဉ်လေး.. စီပေးလိုက်တော့.. ဟန်ကျကြသတဲ့..
ဒီပိုစ့်မထည့်နဲ့ဒဂျီး ပတ်တနာတက်တွားမယ် တူညားဟာဒွေလဲပါဒယ် နောက်မှကိုယ်ပိုင်ပိုစ့်ကျမှ ထည့် အောင်မြတ်လေး တော်သေးဟေးဟေး
ဒီမှာတင်တထိုင်တည်းဖတ်လို့မဖြစ်လို့ PDF လုပ်သိမ်းလိုက်တယ်မမရေ။
ဒါမှ ချက်ကြည့်တဲ့အခါ ပြန်ဖွင့်ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာ။
ပုံ လုပ်ပေးတဲ့ ညီမလေးကိုလည်း ကျေးကျေးပါ
ပုံကလေးလှပါအိ သော်သော်ရေ ကျေးကျေးဘာ။ ဒီထမင်းဆိုင်ပိုင်ချင်က စဖိုမူးကိုပေးမ၀င်ဘူး။ လော့အင်ဝင်မရလို့ အီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ငါလဲမျှော်နေတာအေ့။ သူများချက်တာတွေအတုခိုးမို့။ ပျော်ထှာ
ဆွိဆွိ ဘယ်ရောက် ???
မအားလို့ရော။ မွသဲဖြေနိုင်တာရောမို့ ခဏ နားနေတာပါ။
မွတဲ လဲလော့အင်ဝင်မရလို့ ဂုမှရောက်သတော့
တပတ်လောက် ရှိပြီ ထမင်းစား ပျက်နေတာ
စာကို သရေယိုပြီး ဖတ်သွားပါတယ်
အပြင်မှာပါ တကယ်ကျွေးရင် ပိုကောင်းပါ့မယ်
ရတယ်ရတယ် ၀ယ်သားစား ကြိုက်သလောက်စားကျသလောက်ရှင်း
ဒီတစ်ခေါက် စားစရာဒွေက တားတားကြိုက်ကြိုက်တွေချည်းပဲ
တီဒုံကလည်း အီကိုကွတ်နဲ့ ပုဇွန်စပယ်ရှယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးပြီးမှ စိတ်ထဲကပဲ အမျိုးမျိုးချက်နေနိုင်တယ်။
ချွေးမွက ဒယ်ကိုင် လို့
ဟင့် အာတီဒုံးမီးမီးပုဂျွန်ချားဘူးချင့်။ ပုဂျွန်းစီးရီးပီးရင် တခြားစီးရီးလဲထည့်ပေးဘာချင့်
အနော်ရယ်၊ မွသဲရယ် အာတီဒုံရယ် ၃ ယောက်။
ဒီပို့စ်မြင်တော့မှ ပေးထားပြီးသားကတိကို အမှတ်ရသွားတယ် ..
ဘာတွေချက်ပေးရရင် ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်အုန်းမယ် ..
စား တော် ကဲ မ အိကျ န် နေ သေး သည်
ရုံးအရွှေ့အပြောင်းနဲ့ မအားဘူးထင်လို့ နောက်တစ်သုတ်မှ ပူစာမှာ။
ဟုတ်တယ် ချွေးမွလေးရေ စာဖိုမူးမွအိဆီကတောင်းအုံး
ဒီနှစ် နျူးရဲရယ်စလူးရှင်းမှာ အစားအသောက်တွေမငန်းတော့ဘဲ ၀ိတ်လျော့ပါမြီဆိုပြီး အခုလိုဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေရေးထားတော့လည်း.. စိတ်ကမခိုင်ချင်တော့ :((
အော်ဝိတ်ချချင်ရင် ထမင်းပေါင်းလုပ်ချားဘာဒယ်ချို ခရစ်ကလေးရယ်။ ထမင်းပေါင်းလုပ်ချားပေါ့ကွယ်။
ထမင်းပေါင်းကိုတော့ မန်းစတိုင် ပြန်ပေါင်းပေးဘာ
မန်းထမင်းပေါင်းတော့တတ်ဘူးအေရယ်။ မိုးကုတ်ထမင်းပေါင်းတော့သိဒယ် ပြန်လေ့လာလိုက်အုံးမယ်အေ့။ မိုးကုတ်ကလဲအခြောက်ပေါင်းပဲ။
မန်းလေးပေါင်းက သများပေါင်းတတ်တယ် မွသဲ။
စားလို့ကောင်းမှာပဲ နော် .. ပုံလေးနဲ့ပါ တွဲမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်
အာဟိ ချက်ပီးရင် ဒါ့ပုံရိုက်ဖို့မေ့မေ့သွားတယ် စားပီးမှချည်းသတိယတယ်
လာ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ မနိုရေ။